Abeneme omalume kuhlongozwa eyokuvalwa kwamaveni | News24
Abeneme omalume kuhlongozwa eyokuvalwa kwamaveni
PHOTO: file UMnyango wezokuThutha kuzwelonke wethule umthethonqubo wokuvala kokuthuthwa kwabantu kusetshenziswa amaveni. Lomthethonqubo uzoqala ukusebenza ngoMeyi ngonyaka ozayo.
OMALUME abathathu izingane zesikole eMgungundlovu bathi sibashaqisile isiphakamiso soMnyango wezokuThutha kuzwelonke sokuthi kuzovalwa amaveni.
Ngokusho komnyango wezokuThutha kuzwelonke lomthethonqubo uzoqala ukusebenza ngenyanga kaMeyi ngonyaka ozayo. Lomthetho ukubeka kucace ukuthi akekho umuntu ovumeleke ukuthutha abantu ngemoto yokuthutha izimpahla ukuze enze inzuzo.
Okhulumela inhlangano emele omalume iScholar Transport uMnuz Phendulani Ndlovu uthe kubathusile ukuhlongozwa kwalomthetho.
“Kusukela ngonyaka owedlule sesibe nochungechunge lwezingxoxo noMnyango wezokuThutha esifundazweni ukuze sikwazi ukuthi sithole ukusizakala ngezimoto ezivumelekile kodwa akukalungi. Kumanje sihlele omunye umhlangano nawo futhi umnyango ukuze sidingide kabanzi ukuhlongozwa kwalomthethonqubo okungenzeka ushiye amakhaya amaningi engenako ukudla ngoba nathi lena indlela esondla ngayo imindeni yethu.”
Eqhuba uNdlovu uthe ngokusebenzisana noMnyango wezokuThutha ngoJuni kulonyaka bakwazile ukuthi baqoqe isibalo somalume abathutha izingane ukuze kuhlongozwe ukuthi bangasizakala kanjani.
“UMnyango ukhiphe imali yokuthi sikwazi ukuqoqa isibalo somalume abathutha izingane esifundazweni. Cishe babalelwa ku 3900 omalume abathutha izingane esibabhalisile yize kunabanye abasala ngoba bengazange balandele zonke izimfanelo.”
Uthe okungabasiza kakhulu njengomalume ukuthi umnyango ubakhulumele nabamagalaji adayisa izimoto zokuthutha ezigunyaziwe.
“Kumba eqolo ukukhokhela imoto egunyazwe ukuthutha abantu njengeQuantum. Sinaso isifiso sokuthi siyeke ukusebenzisa amaveni kodwa asikwazi ukukhokha uR12 000 wesitolimende ngenyanga sibe singenzi leyomali ngenyanga. Siyafisa ukuthi umnyango ukhulume nabamagalaji sehle isitolimende kunyuke okungenani iminyaka yokukhokha.”
Omunye umalume othutha izingane eMbali ongathandanga igama lakhe lidalulwe uthe nabo bayathanda uma izingane ziphephile.
“Besingajabula uma ngase uhulumeni kube khona indlela angasisiza ngayo ngoba nathi asithandi ukusebenza ngalamaveni. Kodwa manje ngoba silambile futhi sixakekile akukho lapho sisebenza khona mhlampe asixhase noma ngamakhumbi ukuze siqhube kahle umsebenzi wethu.”
UMnuz Mdu Ncalane okhulumela uMnyango wezokuThutha esifundazweni uthe kwasekuqaleni umnyango wawukubeke kwacaca ukuthi ukuthuthwa kwabantu ngamaveni akukho semthethweni.
“Njengomnyango siyaseseka isinqumo sikazwelonke sokuthuthukisa izimpilo zabagibeli ngoba amaveni awekho semthethweni. Ezindaweni zasemaphandleni besikuqonda ukuthi abantu bathuthwa ngamaveni ngenxa yokushoda kwengqalasizinda kodwa lokho akusho ukuthi kusemthethweni. Njengomnyango kuyasikhathaza ukushona kwezingane zesikole ezingozini ezibandakanya amaveni futhi nathi besenza konke okusemandleni ukuqeda ukuthuthwa kwazo ngamaveni.”
UNcalane uthe umnyango usuhlanganise isibalo sabafundi akade bethuthwa ngamaveni ukuze bezokwazi ukuthi bathuthwe ngokohlelo lomnyango oluphephile.
“Ezindaweni zasemaphandleni ngokusebenzisana ne-SANTACO simatasatasa silungisa imigwaqo ukuze izimoto zizokwazi ukungena zithuthe abantu.”
Ephetha uthe izinhlelo zomnyango zokusebenzisana nomalume ukuze basizakale ngezimoto ezifanele ziyaqhubeka.
“Imihlangano nomalume iyaqhubeka, siyafisa ukuthi nabo basizakale kodwa futhi ngeke sibeke izimpilo zabantu engozini. Kunethimba lomnyango eliphezu kwezingxoxo nabo omalume ngokubambisana ne-SANTACO.”